JR kunye neSouthfork Ranch
Umhleli - Änderungsdatum: 1. Februar 2019
Ixesha lokuhamba i-2: Inxalenye yembali yomzila
Umhleli - Änderungsdatum: 25. Dezember 2018
Ebusika ngaphambi kweminyaka eyi-40 edlulileyo
ke Umhleli - Änderungsdatum: 16. März 2019
Yonke into yayingcono kwiintsuku zakudala? Kuyavunywa, ihlabathi ngelo xesha lalibonakala linzima. Kukho amabhloko amabini, i USSR kunye ne-USA. UbuKomanisi, obuza kukunqoba i-capitalist kwiminyaka elishumi kamva.
Phantse i-36 iminyaka edlulileyo
ke Umhleli - Änderungsdatum: 3. Juli 2018
UMtyholi General Mladic -Ratko
ke Umhleli - Änderungsdatum: 11. Dezember 2017
Idiot i-official ihlonywe kungekudala ngaphambi kwe-200 iminyaka
ke Umhleli - Änderungsdatum: 25. Oktober 2017
Intsimi ye-Field ngaphambi kwe-100 iminyaka-yintoni enye!
ke Umhleli - Änderungsdatum: 11. November 2018